Beddelaan Bitcoin Cash In US dollar
Updated 21/01/2020 13:26
Beddelka Bitcoin Cash In US dollar. Bitcoin Cash qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
1 Bitcoin Cash = 338.35 US dollar
U beddelo Bitcoin Cash illaa US dollar celceliska heerka hadda la joogo. Wuxuu muujiyaa celceliska qiimaha beddelka Bitcoin Cash galay US dollar. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. 1 Bitcoin Cash wuxuu dhacayaa 6.464432 US dollar. Qiimaha Bitcoin Cash maanta qarashkiisu waa 338.35 US dollar Heerka Bitcoin Cash sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -187 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Heerka Sarrifka Bitcoin Cash In US dollar
Usbuuc ka hor, Bitcoin Cash waa la iibsan karaa 346.74 US dollar. Seddex bilood ka hor, Bitcoin Cash waxaa lagu badali karaa 228.24 US dollar. Lix bilood ka hor, Bitcoin Cash waxaa laga iibsan karaa 308.76 US dollar. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. Toddobaadka gudihiisa, Bitcoin Cash illaa US dollar sicirka sarrifka ayaa is beddelay -2.42%. Bishii, Bitcoin Cash illaa US dollar sicirka sarrifka oo is beddelay 79.55%.
Bitcoin Cash (BCH) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Beddelaadda Lacagta digital Bitcoin Cash US dollar
Bitcoin Cash (BCH) In US dollar (USD)
1 Bitcoin Cash 338.35 US dollar
5 Bitcoin Cash 1 691.76 US dollar
10 Bitcoin Cash 3 383.53 US dollar
25 Bitcoin Cash 8 458.82 US dollar
50 Bitcoin Cash 16 917.65 US dollar
100 Bitcoin Cash 33 835.29 US dollar
250 Bitcoin Cash 84 588.24 US dollar
500 Bitcoin Cash 169 176.47 US dollar
Waad iibsan kartaa 3 383.53 US dollar for 10 Bitcoin Cash. Maanta, 8 458.82 US dollar waa la iibsan karaa 25 Bitcoin Cash. Maanta, 16 917.65 US dollar waa la iibin karaa 50 Bitcoin Cash. Hadaad leedahay 100 Bitcoin Cash, ka dibna gudaha British Virgin Islands waad iibsan kartaa 33 835.29 US dollar. Maanta, 250 Bitcoin Cash waxaa lagu iibin karaa 84 588.24 US dollar. Beddelaadda Lacagta digital maanta 500 Bitcoin Cash ayaa ku siinaya 169 176.47 US dollar.
Bitcoin Cash (BCH) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan Bitcoin Cash In US dollar maanta 21 January 2020
21/01/2020 343.36 11.36 ↑
20/01/2020 332 -13.75 ↓
19/01/2020 345.75 -38.57 ↓
18/01/2020 384.32 55.61 ↑
Maanta 500 BCH = 343.356621 USD. 20 January 2020, 1 Bitcoin Cash = 331.99868 US dollar. 19 January 2020, 1 Bitcoin Cash kharashyada 345.75355 US dollar. Ugu badnaan Bitcoin Cash to US dollar sicirka sarrifka bishii ugu dambeysay ayaa ahayd 18/01/2020. Ugu yar BCH / USD sicirka sarrifka bishii ugu dambeysay ayaa ahayd 17/01/2020.
Bitcoin Cash (BCH) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Bitcoin Cash iyo US dollar
Bitcoin Cash codka lacagta digital BCH. Bitcoin Cash ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 22/06/2014.